Tinokoshesa kuvanzika kwako
Tinokoshesa kuvanzika kwako. Hatitengese, kurenda kana kukwereta chero ruzivo runozivikanwa (kusanganisira e-mail kero, nhamba yefoni, nezvimwewo) nezve vatengi vedu kune chero munhu. Hatidi kukukumbira nefoni kana tsamba. Chero ruzivo rwamunotipa rwunoshandiswa zvinonzwisisika, rwunobatwa zvakanyanya nekuchengetedzeka, uye harizoshandiswa munzira dzausina kubvuma.
uchishandisa kurongedza zviri nyore, seti imwe neimwe yakarongedzwa muhomwe yepurasitiki, kana gumi seti muhomwe yepurasitiki hombe, kana yakagadziridzwa.
Ndokumbira utarise ku "saizi" chikamu mune chimwe chigadzirwa kune rumwe ruzivo. Nezve saizi chati, ndapota shanya: size chati
Iwe unogamuchira OEM mamiriro uye chii chiri chidiki huwandu hweiyo OEM mamiriro?
Ehe, mamiriro eOEM anogamuchirwa uye hushoma huwandu hunotsamira pazvinhu izvo zvaunorayira. Uye ndokumbirawo utumire mifananidzo yakajeka yemhando yaunoda kuda kutipa, tichaendesa kune Vagadziri vedu, kana tinge tave nezvinhu zvacho, tinogona kukugadzirira nenguva. Kana usati, isu tichava tsvaga iwe, uye ipapo chigadzirwa. uye tumira samples nezvimwe zvinhu zvaunokugadzirira iwe kutanga kuitira kuti ugone kuongorora.
Isu tinoshandisa yakakwirira mhando machira ayo anogona kutambanudzwa nyore kuti anoshambira masutu, uye 100% polyester yemahombekombe akapfupi, kana yakagadzirirwa.
Nezve Mutengo uye Kubhadhara
Iwe unogona kutitumira meseji kana kubvunza, utiudze iyo modhi kwete yezvigadzirwa iwe zvaunofarira uye neUwandu hwakakumbira, ipapo tichazokutumira iwe kubhota.
Iyo bumbiro remhedzisiro
Isu tinopa kuderedzwa kwehuwandu hwakasiyana, ndapota taurirana nehuwandu hwehuwandu hwako hwekuda.
Yedu yekubhadhara uye ruzivo rwekubhadhara kwebhangi.
Isu tinogamuchira iyo Kiredhiti Kadhi, Bank Transfer. Diki kana sampula yekuraira, tinobvuma kubhadhara pamhepo zvakananga.
Kana iwe uchida kundibhadhara kuburikidza neBhangi, ndapota taura nesu.
Nezve nguva yekubhadhara
Isu tinobvuma online kubhadhara pakarepo neKiredhiti Kadhi. General Kubhadhara kunofanirwa kuitwa mukati memazuva matatu ekuraira. Kana paine chero chikonzero chekunonoka kubhadhara, tapota taura nesu kutanga. Ndatenda.
Ndeipi yakaderera yekuraira huwandu?
A: yemaitiro edu ezvitoro, iyo MOQ ichava gumi pcs pachimiro / ruvara.
Uye yekugadzirwa yakarongedzwa, MOQ: 200 chidimbu pachiitiro / ruvara.
Iwe unogona kutiitira sampuro?
A: Ehe, asi iwe unofanirwa kubhadhara sampuro uye mutengesi wedhiri. Iwe unogona kutitumira izvo zvakadzama zvinodiwa zve sampuro kuti tikwanise kutarisa mutengo uye nguva yemuenzaniso, mushure mekugamuchira mubhadharo wako, isu ticharonga yako yekuraira sampuro nekukurumidza.
Iwe unogona kuwedzera isu yedu logo pane zvigadzirwa?
A: Ehe. Isu tinopa basa rekuwedzera logo revatengi, ndapota tumira logo dhizaini muPDP kana AI fomati.
Tichazotumira nezviratidziro zvepasi rose zvinoratidzira EMS / DHL / UPS / TNT, kana isu tichazotumira nechikepe kana iyo yekuraira cubage inopfuura 1cbm, izvo zvinoenderana nehuwandu.
Zvinotora mazuva mangani?
Kazhinji zvinotora mazuva 3-4 ekushanda kupasirese nyika neUSS, uye mazuva mashanu ekushanda neEMS (kunze kweRussia), uye mazuva 4-5 ekushanda naTTT / DHL zvinoenderana nenzvimbo yaunogara mauri.
Nezve nguva yekutumira
Paunogadzirira kuisa odha, isu tichaongorora yako yekutanga uye tobva tatumira iyo invoice kwauri mukati maawa makumi maviri nemana. Uye zvezvinhu zvakaunganidzwa isu tichaendesa mukati memazuva manomwe, kana zvisina kudaro isu tichasimbisa nguva yekutumira newe.
Ndiudze mari yekutumira usati waida
Mari yekutumira inoenderana nehuremu, huwandu uye nzira yekutumira (EMS, DHL, TNT, UPS, kana gungwa yekufambisa) uye nyika yekuenda. Nekudaro zvakatiomera kwatiri kuti titaure chaicho mari yekutumira usati waisa odha （ uremu hwehuremu hweimwe chidimbu bikini inenge 0,2kg, asi huremo hwehuremu hwakaita kunge 0.5kg / pc). Uye iwe unogona kusarudza kambani yekutumira yaunoda uye isu tichaongororawo zvese zvakajeka uye tipe nzira yakakodzera kwazvo kwauri.
Nezve Kudzoka & Terms
Isu tinobatanidza kukosha kune mhando yechigadzirwa uye masevhisi, saka usati watumira parcel yacho kunze, isu tinofanirwa kutarisa chigadzirwa kaviri zvakare uye kurongedza isu pachedu.
Maitiro ekuita sei, Kana chinhu chacho chakakanganisika?
Tine urombo kuti chinhu chacho chakakanganisika, uye isu tichaita nemabatiro akadai zviitiko. Isu tinodawo rubatsiro rwako.
Kutanga: Kana chinhu chacho chisiri chakashata, ndokumbirawo kutiudza mukati memazuva matatu ekuzvitakura.
Wechipiri: ndapota pfura iwo mufananidzo wechinhu wacho une urema, wobva watumira mufananidzo wacho neemail, kuti ndivaise kuna technical Director, mushure mekutarisa uye kubvuma, tichawedzera iwo matsva kune yako inotevera kuraira mahara.
Kudzoka kana kubvisa mutemo
Kuti isu tipe zvakanyanya nyore vatengi masevhisi, tinobvuma kudzoka uye kuraira kudzimwa mukati memazuva makumi maviri nemana.
Pamusoro pezvose, tinotenda nekuisa kurongeka pane yedu webhusaiti www.samgon.com . Kugutsikana kwako kunenge kuri kwedu kukuru kurudziro.
Isu tinoisa peji kuti let iwe uwane inoenderana inotsanangudza kambani yekutevera nzira nekukurumidza uye tinotarisira kuti inogona kukubatsira kuti upedze iyo yekutevera yekubvunza kubvunza.
Zvinoreva kuti isu tatumidzira yako oda kana uchigamuchira nhamba yekutevera. Unogona kutarisa mamiriro epakeji yako pane yekutevera peji yekutevera . Chero mibvunzo, ndapota taura nesu wakasununguka!
PS: Dzimwe nguva kuratidza kunonoka pakugadzirisa iyo ruzivo pane webhusaiti yavo. Saka ndapota tsungirira uye woongorora nguva yakati gare gare. Kunzwisisa kwako kuchafarirwa kwazvo, maita basa!